Amawashi ama-5 amahle kakhulu ezemidlalo | Amadoda aSitayela
Ezinsukwini ezimbalwa ezedlule sikukhombisile ifayela le- Iqoqo elisha likaJeremy Scott leSwatch, iqoqo lesiteleka elifanele kuphela abanesibindi kakhulu. Kepha uma, njengami, uthanda amawashi alula, ulayini wezemidlalo ngenkathi uhlala unobuhle, ungaphuthelwa yilokhu kukhethwa kwamawashi ezemidlalo afanele ukugqokwa osukwini lwakho nosuku. Siyethemba ukuthi omunye wabo angagcina engaphansi kwesihlahla sakho kulo Khisimusi. vintage de I-Bell & Ross ICarbon black inesiphetho sematte, futhi injalo liphefumulelwe ngamadeshibhodi endizas kusuka kuma-40s. Kokubili izandla nezinombolo zinombala wesihlabathi. Uhlobo lwayo lwe-chrono, esimweni sensimbi esingu-41 mm, sinezici ze-ETA 2894.
Imodeli yeSantos 100 Carbon Chronograph kusuka Cartier es enye yamamodeli adume kakhulus yenkampani kusukela ekuqaleni kwekhulu lama-8630. Yethula amacala kanye nama-titanium pusher, nezinombolo, ezilandela uhlelo lwamaRoma, zimhlophe. Ibhande, elimnyama, line-seave weave. Leli washi ligcina i-Cartier caliber XNUMX ezenzakalelayo.
Ukubuka kweBell & Ross neCartier, ngokulandelana
ILongines, iSeiko neBreitling yamawashi eBentley, ngokulandelana
IColumn-Wheel Chronograph Record ngu I-Longines kuwashi liphefumulelwe ngama-60s kodwa ngobuchwepheshe obusha ngokuphelele. Inokunyakaza okukhethekile, ubukhulu be-L688.2, obufakwe isondo lekholomu. Leli washi elimangazayo lithengiswa ngama-euro ayizi-2.720.
Imodeli ye Seiko kuyinto kwemvelo imodeli Kinetic ukuthi Seiko wadala ngo-1988 ngikwazi ukuhlala ngaphakathi yima bfuthi kuze kube yiminyaka emine. Uma ingagqokiwe esihlakaleni isikhathi esingaphezu kwamahora angama-24, iwashi liwela esimweni sokulala, kepha uma liphinda lisetshenziswa izandla zihlelwa ngokuzenzekelayo lisho usuku nesikhathi.
Ukuphumula idale imodeli yeBentley Barnato ngensimbi. Ihlanganisa ukunyakaza kwe-chronograph eqinisekisiwe ye-COSC kanye nesistimu ye-chronograph esebenza kahle kakhulu futhi efundekayo. Ungakhetha phakathi kokudayela okumnyama noma kwesiliva. Futhi kukhona uhlelo olulinganiselwe lwezingcezu zegolide ezingama-30. Lesi simanga 100% iBentley Inentengo yama-euro angama-10.160.
Ucabangani ngale mawashi wezemidlalo? Ngabe ziyahambisana nohlobo lwewashi ovame ukugqoka? Intandokazi yami imodeli yeLongines, ngoba ngicabanga ukuthi iyona ehlanganisa kahle umoya wezemidlalo ngaphandle kokulahlekelwa iota yobuhle. Iyiphi oyithande kakhulu? Ingabe ukhetha lolu hlobo lwewashi noma ama-Swatch?
Nge | | GQ
Indlela ephelele ye-athikili: Amadoda aSitayela » imfashini » Amathrendi » Amawashi ama-5 amahle kakhulu ezemidlalo